Daawo muuqaalka: Wasiirka Horumarinta iyo adeega Bulshada oo Baladwayne gaartay |
Daawo muuqaalka: Wasiirka Horumarinta iyo adeega Bulshada oo Baladwayne gaartay
Magaalada B/weyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta booqasho ku tegay wasiiro ka tirsan xukuumada Somalia oo kala ahaa wasiirka horumarinta adeega bulshada ee xukuumada Somalia Drs. Maryan Qaasim iyo wasiirrka wasaarrada Kheyraadka dalka C/risaaq Cumar Max’ed.
Wafdigan oo sidoo kale ay ka mid ahaayeen howlwadeeno iyo agaasimayaal ka tirsan wasaarada caafimaadka ayaa waxaa garoonka dayuuradaha Ugaas Khaliif ku soo dhoweeyey masuuliyinta gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada AMISOM.
Wasiirka horumarinta adeegga bulshada iyo xubnihii la socday ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiinta maamulka gobolka, dhaqaatiirta gacanta ku hayso goobaha lagu daweynayo dadka qaba cudurka shuban biyoodka, saraakiisha ciidamada, Odayaasha dhaqanka kuwaasoo ay ka dhageyteen warbixino ku saabsan cudurka shubanka iyo marxaladaha uu soo maray.
Waxaa halkaas ka hadashay wasiirka hormarinta adeega bulshada Drs. Maryan Khaasim Axmed oo sheegtay in cudurka daacuunka uusan ka jirin illaa hadda magaalada B/weyne, balse cudurka hadda socdaa uu yahay shuban biyood, iyadoo sheegtay iney wadaan qorsheyaal ay wax uga qabanayaan cudurkaas.
Sidoo kale, waxay sheegtay wasiiradu in cudurka daacuunka uu yahay mid ka khatar badan shuban biyoodka iyadoo weydiisay dhakhaatiirta ciidamada Jabuuti in ilaa iyo hadda ay arkeen qoys dhan oo mar kaliya uu soo ritay cudurkan, iyagoo ku jawaabay inaysan arag, taasoo wasiiradu u cuskatay doodeeda ku aadan in uusan aheyn daacuun cudurkan balse uu yahay shuban biyood caadi ah.
Halkaan hoose ka daawo arbixintaani oo faahfaahsan